Vietnamjet nandefa ny zotra Nha Trang sy Busan
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao farany momba ny Korea Atsimo » Vietnamjet nandefa ny zotra Nha Trang sy Busan
Airlines • Airport • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao • Vaovao farany momba ny Korea Atsimo • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Vaovao Mafana Vietnam
Navoaka tamin'ny fomba ofisialy ny zotram-piaramanidina vaovaon'i Vietnam vaovao, mampifandray ny tanàna amoron-dranomasina malaza any Vietnam, Nha Trang Busan, Tanàna seranan-tsambo malaza any Korea Atsimo, manamarika ny asa fanompoana fahasivy ataon'ny kaompaniam-pitaterana eo amin'i Vietnam sy Korea Atsimo. Ny mpitatitra voalohany izay niasa tamin'ity serivisy mivantana teo anelanelan'ny toerana roa ity, ny zotra Nha Trang - Busan dia antenaina hahatratra ny fitomboan'ny fitakiana dia an-toerana sy ny mpizahatany eo amin'ireo firenena roa ireo sy manerana ny faritra. Tamin'ity tranga ity, ny mpandeha rehetra tamin'ireto sidina manokana natokana ireto dia nahagaga fa nahazo fahatsiarovana mahafinaritra avy tamin'i Vietjet.
Ny zotra Nha Trang - Busan dia miasa sidina miverina efatra isan-kerinandro isaky ny Alatsinainy, Alarobia, Sabotsy ary Alahady manomboka ny 16 Jolay 2019. Ny faharetan'ny sidina dia adiny efatra sy 40 minitra isaky ny tongotra. Hiainga ny sidina manomboka amin'ny Nha Trang amin'ny 23.50 ary tonga ao Busan amin'ny 06:30. Ny sidina miverina dia miainga avy any Busan amin'ny 08:05 ary mipaka any Nha Trang amin'ny 10:45 (Rehefa ora rehetra).
Amin'ny maha-tanàna seranan-tsambo marobe azy ary tanàna lehibe indrindra faharoa any Korea, Busan dia manolotra toeram-pivarotana mahaliana, toeram-pivarotana mahaliana ary tsena hazan-dranomasina malaza ary koa traikefa fizahan-tany mahafinaritra miaraka amin'ny maritrano sonia hita taratra amin'ny alàlan'ny tranobe, tempoly ary tranombakoka. Mandritra izany fotoana izany, Nha Trang dia nanjary toerana tora-pasika ankafizin'i Vietnam tato ho ato, nahasarika ireo mpandeha miaraka amoron-dranomasina lava, bay malaza, nahandro manan-karena ary olona sariaka.
Tany am-piandohan'ny volana martsa lasa teo dia nomem-boninahitra i Vietnam ho "mpitatitra entana lafo vidy ho an'ny serivisy tsara indrindra" any amin'ny Korea Prestige Brand Awards 2019, natolotry ny gazety Korea Economic Daily izay nanaporofo bebe kokoa ny fahatokisan-tena sy ny fahatokisan'ny mpanjifa Koreana ny marika.
Miaraka amin'ny tamba-jotra misy zotra 120, i Vietnam dia miasa sidina azo antoka miaraka amin'ny tahan'ny fahatokisana ara-teknika 99.64% - ny taha ambony indrindra amin'ny faritra Azia Pasifika. Amin'ny maha mpikambana feno azy ao amin'ny International Air Transport Association (IATA), Vietnam dia nahazo mari-pankasitrahana IATA Operational Security Audit (IOSA) ary nahazo mari-pahaizana 7-kintana, taha ambony indrindra ho an'ny fiarovana, amin'ny AirlineRatings.
Amin'ny alàlan'ny fanolorana tapakila mora vidy, kilasy tapakila isan-karazany ary fampiroboroboana manintona, i Vietnam dia mamorona traikefa manidina tsy hay hadinoina ho an'ireo mpandeha amin'ny fiaramanidina vaovao misy seza milay, safidy iray sakafo mafana be sivy natolotry ny ekipa kabine tsara tarehy sy sariaka, ary tolotra fanampiny nanampy hafa.